Madaxweynaha Somaaliland oo gaaray dalka Jabuuti - Awdinle Online
Madaxweynaha Somaaliland oo gaaray dalka Jabuuti
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaminayo ayaa waxaa ay gaareen Magalada Jabuuti ee Caasimadda wadanka Jabuuti, iyada oo siwyen halkaasi loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Jabuuti kusoo dhaweeyay Wasiirka Wasaaradda Biyaha, Beeraha, Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga ee Jabuuti Maxamed Axmed Cawaale (Maxamed Soomaali) oo ay wehelinayaan masuuliyiin sar-sare oo ka tirsan dalka Jabuuti.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo wefdiga uu hoggaaminayo ayaa waxaa la filayaa in saacadaha so socda ay la kulmaan madaxda dalka Jabuuti iyaga oo kala hadli doona arrimo la xiriira xoojinta xiriirka Somaliland iyo Jabuuti.
Previous articleDayax Gacmeedkii labaad oo Itoobiya u dirtay Hawada.
Next articleDowladda Soomaaliya oo heshiis la saxiixatay Saddex Dowladood